ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဗိုလ်အောင်ဒင် ပြန်လာပြီ”
အရေးကောင်းသလို၊ တင်ပြချက်ကလည်း ထိရောက်မှုအတော်ရှိတဲ့ စာတစ်ပုဒ်။
ကလောင်အစွမ်းကို ဆေးတစ်ခွက်လို အသုံးချပြိး အဆိပ်သင့်နေသူများ ကုသပေးနေသာ ကိုပေါ ကိုလေးစားမိပါသည်။
ကိုပေါရဲ့ဆေးကတော့ ထက်လှပါတယ်- အဆိပ်သင့်နေသူကို ဆေးသောက်ရအောင် ကြိမ်လုံးတစ်လုံးတော့ ရှာရဦးမယ်။
ခွင့်တောင်းပါရစေ.- ကျွန်တော်တို့ Blog -www.journal.sanchaung.com မှာ တင်ထားဖို့ ခွင့်ပြုနိုင်မလား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့... သုံးပါ။
ဗိုလ်အောင်ဒင်ကား ပြန်နွေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ ကျေးဇူး။ ဒါနဲ့ “ဗိုလ်အောင်ဒင် တစ်ကိုယ်တည်းသမား အရူးကြီးပမာ ဖြစ်ကာဇာတ်သိမ်းမည်” ဆိုတဲ့ သီချင်းက အဲဒီကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးလားဟင်။
မယုဝရီ…. မှန်လိုက်လေ။ ဇာတ်သိမ်းသီချင်းလေဗျာ။ အရူးကြီးပမာ ဖြစ်သွားတဲ့ တစုံတယောက်ကိုတောင် သတိရမိတယ်။
ကြုံလို့ပြောပြရဦးမယ်..ငယ်တုံးက အိမ်ကိုဧည့်သည်လာတိုင်း နံရံပေါ်က ဖေဖေ့ဓါတ်ပုံကို ဒါဗိုလ်အောင်ဒင်လားလို့ မေးလေ့ရှိကြတယ်။ ကိုယ်ကတော့တူတယ် မထင်ပေါင်. ဒမြနဲ့နှိုင်းရမလားဆိုပြီး ခလေးပီပီ စိတ်ကောက်သေးတာ.. အံမယ်..အမေလုပ်သူကတော့ သဘောအကျကြီးကျပြီး လဖ္ဘက်ရည်တွေ မုံ့တွေချကျွေးရတာအမော..
အခုကိုပေါက ဗိုလ်အောင်ဒင်ကို သူနဲ့တင်စားလိုက်တော့ ကိုယ်တို့အမေ စိတ်
ညစ်ရှာမယ်။ ကိုယ်ကတော့ မဟော်သဓါရဲ့ သားတရားစီရင်ခန်းလေး သတိယမိတယ်။
အခု ဒမြဗိုလ်ကြီးကလဲပြုံးနေပါတယ် လက်ကိုင်ပုဝါနှစ်ထည်လုံးသူ့ဟာချည်းပဲချထားတာဆိုတော့ ပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့
နောက်ဆုံးကျတော့ ဗိုလ်အောင်ဒင်နဲ့ မမြ၀င်း ရသွားကြတယ် မဟုတ်လား။ သားဗိုလ်အောင်ဒင် ဇာတ်ကားမှာ ကြည့်ဖူးတာပဲ။
ကိုအောင်ကိုကိုထိုက်ပြောတာနဲ့ သတိရမိတယ်။ လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ထည်ကို မျိုချပစ်ရမလား မသိဘူးနော်။
ဗိုလ်အောင်ဒင်ကို အရူးကြီးပမာဖြစ်ကာ ဇာတ်သိမ်းပြီ ဆိုတဲ့လူနဲ့၊ အမေစိတ်ညစ်မှာ မြင်ယောင်တဲ့လူနဲ့၊ နှစ်ထည်စလုံး သူ့လက်ကိုင်ပုဝါချည်းပဲ ဆိုတဲ့လူနဲ့၊ နောက်ဆုံး လက်ကိုင်ပုဝါတထည်ကို မျိုချပစ်ဖို့ ကြံတဲ့လူနဲ့ (လက်ကိုင်ပုဝါ မြိုဖို့ကြံတဲ့သူဟာ Thinking out of the box or out of the mouth?? )…. စုံလင်ပါပေတယ်။ ကွန်မင့်တွေကို ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။